သြဂုတ်လ 2014 |3၏စာမျက်နှာ 32 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 3)
Mediaproxy IBC 2014 မှာထုတ်ကုန်များ၏ LogServer Suite ဦးလွတ်မြောက်
Mediaproxy Pty ။ , Ltd. , ထုတ်လွှင့်လိုက်နာမှုသစ်ထုတ်လုပ်ရေး, content တွေကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင် IBC9မှာထုတ်ကုန်များ၏ယင်း၏ LogServer suite ကို၏ဗားရှင်း 2014 လွှတ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းအသစ်တခု core ကို encoding ကအင်ဂျင်ပို့, အများဆုံး, စွယ်စုံကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်လွှတ်ပေးရန်ကိုယ်စားပြုပြီးတစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအသစ်ဒီဇိုင်းအသုံးပြုသူ interfaces, ပြန်ပြုစုပျိုးထောင်ဖြစ်ကြောင်း ...
Marine xVu (TM) ယခုထက် ပို. 20 သန်းဖုန်းများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
အရည်အသွေး Saint John, နယူး Brunswick, ကနေဒါအပေါ်ယှဉ်ပြိုင်ဒါက 75 ဘီလီယံတီဗီများအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ပွဲများနှင့်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းရှင်များကျော် - IP ကိုဗီဒီယို (TM) အတွက်ဆော့ဝဲသတ်မှတ်ထားသောစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး (SDM) တွင် Marine, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ယနေ့ကခိုင်မာတဲ့ဈေးကွက်ကိုမြင်လျှင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် တိုးတက်မှုနှုန်းတီဗီနဲ့ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်ကိုတွေ့မြင်နှင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပြဿနာတွေနဲ့ချမောင်းထုတ်ရန် Marine xVu (TM) ၏အားသာချက်ယူအဖြစ် ...
ထိုင်ဝမ်ရဲ့ Chunghwa Telecom Broadpeak HEVC ဆာဗာ Technologies ကအတူ 4K အကြောင်းအရာ၏စမ်းသပ် Delivery လုပ်ဆောင်သွားရန်
RENNES, ပြင်သစ် - သြဂုတ်လ 27, 2014 - Broadpeak, content တွေကိုဖြန့်ဝေကွန်ယက်၏ဦးဆောင်မှုပေးသူ (CDN) နည်းပညာများနှင့်နေထိုင်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း cable ကိုဗီဒီယို-On-demand (VOD) ဆာဗာများ, IPTV, OTT နှင့်စပ်တီဗီအော်ပရေတာ, ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ကြောင်း Chunghwa Telecom, ထိုင်ဝမ်အတွက်ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာအသစ်တစ်ခု 4K HEVC streaming ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စမ်းသပ်စီမံကိန်းကိုပါဝါမှ Broadpeak ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ အသုံးချဖို့ ...
သဟဇာတ မှစ. အိန္ဒိယကို select End-to-end အလှူငှပေးဖြေရှင်းချက်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေမမှနထေိုငျ
အဆင့်မြင့် Compression ကိုနည်းပညာ, သဟဇာတရဲ့ဘဲဥပုံ (R) 3100 encoding နဲ့ ProView (TM) 7100 IRDs မှတဆင့်သိသိသာသာပံ့ပိုးပေးခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း San Jose, ကာလီဖိုးနီးယားများအတွက် Bandwidth ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် အိန္ဒိယ, အိန္ဒိယအခြေစိုက်အဓိကထုတ်လွှင့်နထေိုငျ, ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အကြားဆက်သွယ်မှုပိုကောင်းအောင်သဟဇာတတစ်ဦးထံမှအဆုံးမှအဆုံးသို့အလှူငွေဖြေရှင်းချက်ရွေးချယ်တော်မူပြီ ...
AKA NYC Vulture.com မှာကင်ပိန်းကနေတဆင့် "တစ်ချိန်က" ဟုအဆိုပါ Web ကိုဆောင်ကြဉ်း
ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးဘရော့ဒ်ဝေးမှာတော့အေဂျင်စီမဂ္ဂဇင်းရဲ့ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာ site ကိုဗီဒီယိုအချက်အချာဖန်တီးပေးပါတယ်။ NEW YORK-အဆိုပါတိုနီ-အနိုင်ရဘရော့ဒ်ဝေးဂီတတစ်ချိန်ကယခုအပတ်ဂီတဗီဒီယိုနှင့်ပြပွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအသီးသန့်အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ် featured ထားတဲ့အတွက်နယူးယောက်မဂ္ဂဇင်းနှင့် Vulture.com နှင့်အတူတွဲဖက်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး-of ယင်း၏-မျိုးဇာတိကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုစတင် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဖျော်ဖြေရေးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဆက်ကပ်အပ်နှံအချက်အချာ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ...
GB ကို Labs ကသစ်ကို 4K DIT စနစ်အားမိတ်ဆက်
4K ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်စုစုပေါင်းသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်း - On-set ကို IBC 2014 မှာစတင်ခြင်း, GB ကို Labs က '' 4K Duo တွင်-သတ်မှတ်မည်မြင့်မားတဲ့အဆုံး 4K တည်နေရာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဂိမ်း changer ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလျှပ်စစ်အစာရှောင်စားသုံးမိဘူတာရုံတစ်ခု UltraHD သိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းနှင့်လုံခြုံတဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာ LTO backup လုပ်ထားဖြေရှင်းချက်ကယ်တင်တတ်၏။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် 4K စီမံကိနျးအတှကျအလားအလာထဖွင့်လှစ် ...
GB ကို Labs က HyperSpace HDD NAS storage ကိုစနစ်များကိုမှ SSD ကို performance ကိုအဆင့်ဆင့်ဆောင်တတ်၏
HyperSpace 4K သိုလှောင် Accelerator က၎င်း၏အသစ်အ HyperSpace နည်းပညာနှင့်အတူ IBC 2014 မှာလွှတ်တင်, GB ကို Labs ကထုတ်လွှင့်နဲ့ post အဆောက်အဦဆောင်တတ်၏ IBC 2014.HyperSpace များအတွက်မျိုးဆက်သစ်သိုလှောင်မှုနည်းပညာအာကာသဆင့် 1 HDD NAS system ကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့ထူးခြားတဲ့, မြေပြင်ကိုချိုးဖောက် SSD ကိုတိုးမြှင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် စွမ်းဆောင်ရည်မယုံနိုင်စရာအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အသုံးပြုသူများ Ultra-မြင့်မားနှင့်အတူ HDD အကွာအဝေး၏စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေး ...
သဟဇာတပို့ပြီးဖြစ်၏ Electra (TM) ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ၏ 100,000 လိုင်းများနှင့်အတူနယူး Encoding မှတ်တိုင်ရောက်ရှိ
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - သြဂုတ်လ 26, 2014 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ Electra (TM) ထုတ်လွှင့်အန်ကုဒ်မိသားစုနှင့်အတူတင်ပို့ 100,000 လိုင်းများစံချိန်မူကြောင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။ ဤဗီဒီယိုအားချုံ့ဖြေရှင်းချက်၏စျေးကွက်-ဦးဆောင်ပေးသူအဖြစ်သဟဇာတရဲ့အနေအထားအား။ 2004 အတွက်၎င်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းက Electra ပလက်ဖောင်း, ထုတ်လွှင့်, ဂြိုလ်တုများကတပ်ဖြန့်ထားသည် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 32«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»